Ciyaaryahankii hore ee xulka Faransiiska oo geeriyooday - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Ciyaaryahankii hore ee xulka Faransiiska oo geeriyooday
Ciyaaryahankii hore ee xulka Faransiiska iyo kooxda PSG Jean-Pierre Adams, oo geeriyooday ‘isagoo oo 73 sano jir ah.
Jean-pierre Admas ayaa muddo 39 sano
Koomo ku jiray,ka dib markii isbitaalka la geeyay si qalliin jilibka ah uu u maro bishii Marso 1982 ,laakiin marna miyirkiisa dib uma soo noqon ka dib markii si qaldan loo isticmaalay dawadii suuxdinta.
Wuxuu ku dhashay Senegal, daafacaan wuxuu u saftay Nice in ka badan 140 kulan isagoo sidoo kale u soo ciyaaray Paris St-Germain.
Bayaan ay soo saartay kooxda PSG waxay ku sheegtay Adams in uu geeriyooday asiga oo ku jira Hospital la dhigay muddo 39 sano ka hor.
Previous articleWeerar caawa ka dhacay Beledweyne & khasaaro ka dhashay
Next articleMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo Amray Hay’adaha Amniga inay ku baxaan dagaalka